Gabadhaan iyadoo 16 jir ah ayay iskuulka ka taktay, maantana waa bilyaneer | Somaliska
Waxay ka midtahay haweenka ugu dhaqaalaha badan aduunka balse dad badan ma yaqaanaan. Gabadha lagu magacaabo Zhou Qunfei waa gabadha ugu dhaqaalaha badan wadanka Shiinaha waana aasaasaha shirkada Lens Technologies balse wadada ay soo martay ayaa cashar muhiima u ah cidkasta oo doonaysa in ay ganacsi abuurato.
5. Marnaba ma hilmaamto qofka ay tahay – Inkastoo ay horumar weyn oo ganacsi gaadhay ayaa Zhou lagu tilmaamaa qof aamusnaan badan oo deggan. Waxay aad u dhagaysataa shaqaalaheeda, iyadoo marka ay hadasho dadku wada dhagaystaan. “Waxaan isleeyahay waa muhiim in uusan qofku is-qaad-qaadin marka uu horumar gaaro, dhulkana isdhigin marka ay xaaladu ku adkaato” ayay Zhou u sheegtay wargeyska Times.
Dhex Dhexad says:
Mashaallaah waa qof wanaagsan
Waa qof kudayasho mudan walaahi wxaa hormara dadka wnaagsan somliska aad ayaan umahadsantihiin….